सरकारको एक वर्षः ‘लगानी बढेको छ, आयोजनाहरुले गति लिएका छन्’ प्रधानमन्त्री ओली
कस्तो छ प्रगति, के छन् उपलब्धि ? (पूर्णपाठ सहित)
| 2019-02-14 Published
निर्माण सञ्चार, काठमाडौं । आफूले सरकार सञ्चालन गरेको वर्ष दिनको अवसरमा प्रधनमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारले गौरवका अयोजना र पूर्वाधार विकासमा अतुलनीय गतिले काम गरेको दाबी गरेका छन् ।
आफ्नै सरकारको पालामा समृद्धिको आधार तय भएको बताउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारले एक वर्षभित्र गरेका काम, प्रगति र उलब्धिको लामो फेहरिस्त नै सार्वजनिक गरेका हुन् ।
बिहीबार अपराह्न प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारबाट देशवासीको नाउँमा सम्बोधन गर्दै प्रम ओली देशले आर्थिक वृद्धिदर पनि उच्च अंककै कायम राख्न, उद्योग तथा नयाँ परियोजनाहरुमा लागनी बढाउन तथा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका नाउँमा सञ्चालित परियोजनाहरुमा गति बढेको डाटा नै प्रस्तुत गरेका थिए ।
सिंहदरबारस्थित ग्यालरी बैठकबाट देशबासीका नाममा सम्बोधन गरेका हुन् ।
सरकारले गरेका कामको उनले धेरै शब्दमा प्रशंसा गरेका थिए भने सरकारले गरेको काम नगरेको भनी टिप्पणी गर्नेहरुमा ओलीले कटाक्ष गरेका थिए ।
देखिने गरी नै काम गरेको छ सरकारले !
आफ्नो सरकारले देखिने गरी नै काम गरेको उनको दाबी छ ।
उनले भने, ‘कसै कसैले आलोचना गरेजस्तो सरकारले नदेखिने कुनै काम गरेको छैन । गरेका काम देखिने गरी नै गरेको छ !’
उनले आफ्नो सरकारले गरेका उपलब्धिहरु अबको आउने वर्ष झनै परिणामका रुपमा देखिने दाबी गरेका छन् । सरकारको वर्षदिन भाबी दिनको आधारशीला बनेको उनको दाबी छ ।
उनले भने, ‘आज गरिने काम भविश्यका लागि आधार हो र, राजनीतिक स्थीरतालाई मैले समृद्धि तर्फको यात्राका लागि एउटा आधार मानेको छु ।’
१४७ वटा कानुन बने
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको पहिलो आमनिर्वाचन पछि गठित ओली सरकारबारे यतिबेला एक वर्षीय समीक्षा चलिरहेको छ ।
संघीयता स्थापना गर्न र संविधान सभाद्वारा जारी संविधान कार्यान्वयन गर्न पनि कानुनको आवश्यकता थियो । मुलुक नयाँ ढाँचामा गएपछि अभाव रहेको उक्त कानुनी काम आफ्नै सरकारले पूरा गरेको प्रम ओलीको दाबी छ ।
यसबीचमा सरकारले गएका दुई अधिवेशन मार्फत् १४७ वटा कानुनहरु निर्माण गरिसकेको छ ।
सम्बोधन क्रममा प्रम ओलीले आफ्नो सरकार बनेपछि बनेका कानुनहरुको फेहरिस्त नै प्रस्तुत गर्दै सरकराले संघीयता र समृद्धिका लागि वैधानिक, कानुनी र भौतिक संरचनाहरु तय गरेको विवरण सुनाएका थिए ।
उनका अनुसार २५ कानून संघीय संसदबाट पारित भएका छन् ।
५ अध्यादेश जारी भएको, २३ विधेयक संघीय संसदमा प्रस्तुत भएको र २४ विधेयक संघीय संसदसमक्ष प्रस्तुत गर्न अन्तिम तयारीमा सरकार रहेको छ ।
साथै, आजका दिनसम्म ४७ नियमावली र ७ गठन आदेश जारी भएका छन् भने ३३ निर्देशिका, कार्यविधि र मापदण्ड जारी गरिसकेको प्रम ओलीले बताए ।
पूर्वाधार विकास तर्फ के ?
प्रम ओलीले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल दैनिक २२ घण्टा सञ्चालन हुन थालेको र ६ वटा विमानस्थलवाट रात्री सेवा सुरु भएको, गौतम बुद्ध र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा प्रगति भएको प्रधानमन्त्रीले बताए ।
बढ्यो विद्युत् खपत, उपभोक्ता पनि बढे, बढ्यो विद्युत्मा लागनी
ऊर्जा बैंकिङ लगायतका दूरगामी प्रभाव पार्ने खालका सम्झौता भएको प्रम ओलीको दाबी छ ।
उनले बताए अनुसार आजका दिनमा करिब ३ लाख विद्युत् उपभोग गर्ने ग्राहक थपिएको र प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत १७७ बाट बढेर २०० किलोवाट घन्टा पुगेको उनको भनाइ छ ।
‘भेरी–बबई डाइभर्सन आयोजनाको यो एक बर्षमा ८ किलोमिटर सुरुङ निर्माण भएको छ’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने ।
कति बने सडक ?
उनले अघि भने, ‘यो बर्ष मात्रै ४९७ किलोमिटर नयाँ सडक निर्माण भए । ५८९ किलोमिटर ग्रामीण सडकको स्तरोन्नति भयो । जसमध्ये २२१ किमि सडक कालोपत्रे गरिएको छ ।
७ हजार ५ सय किलोमिटर सडक मर्मत गरिएका छन् । ८७ वटा पक्कि मोटरेबल पुल निर्माण सम्पन्न भयो । ४१७ वटा झोलुङ्गे पुल बनाइए ।’
९ महिने सरकार सम्झदै ओलीले भने, ‘दिनको ३ वटा तुइन विस्थापित’
हरेक ३ दिनमा एउटाका दरले तुईन विस्थापन भएको र आफूले सुरु गरेको अभियान अन्तिम चरणमा पुगेको उनले बताए ।
कस्तो छ त उद्योगको प्रगति ?
प्रम ओलीले आफ्नो सरकारको पालामा ४९९ वटा उद्योग दर्ता भएर १ खर्व ९८ अर्ब तथा विदेशी लगानीतर्फ ४१६ वटा उद्योगले अनुमति लिई ५१ अर्व ८३ करोड रुपियाँको लगानी प्रस्ताव आएको दाबी गरेका छन् ।
कम्पनी दर्ताको संख्या २६.७ प्रतिशतले वृद्धि भएको, औद्योगिक वस्तु, निर्माण सामग्री र पूँजी निर्माणमा सहयोग पुग्ने वस्तुहरूको आयात ३२.१ प्रतिशतले बढेको प्रधानमन्त्रीले सुनाए ।
‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूवाट प्रवाह हुने कर्जा तथा लगानी २०.३ प्रतिशतले बढेको छ । निजी क्षेत्रमा भएको कर्जाको प्रवाह पनि २४.१ प्रतिशतले बढेको छ’ उनले भने ।
१० करोड मेट्रिक टन फलाम खानीको पहिचान
नवलपरासीको धौबादीमा करिब १० करोड मेट्रिक टन फलामको धाउको भौगर्भिक भण्डारण स्थल पहिचान भएको प्रम ओलीले बताए ।
उनले भने, ‘छ भन्न सकिन्छ, पहिचान भयो त के भयो ? त्यसले के दिन्छ ? म विनम्रतापूर्वक जानकारी गराउन चाहन्छु– चीनमा गरिएको मेटालर्जिकल परीक्षणमा उक्त धाउबाट स्पोन्ज आइरन उत्पादन गर्न सकिन्छ ।’
आर्थिक वृद्धिदर ७ माथि रहेको ठोकुवा
चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा आर्थिक वृद्धि ६.७ प्रतिशत रहेको र अन्त्यसम्ममा ७ प्रतिशतभन्दा माथि हुने विश्वास प्रधानमन्त्रीले व्यक्त गरे ।
‘धेरैलाई आश्चर्य लाग्ने गरी यस आर्थिक वर्षको ६ महिनामा औसत महंगी ४.२ प्रतिशतमा सीमित छ’ उनले भने ।
त्यस्तै, पर्यटन तर्फ पनि प्रगति भएको प्रम ओलीको दाबी छ ।
नेपाल आउने पर्यटकको संख्या बढेको उनले सुनाए । विदेशी विनिमय संचिति सुविधाजनक अवस्थामा रहेको, किसानले समयमै मल पाएको, २ हजार हेक्टरमा थप सिंचाई सुविधा उपलब्ध भएको पनि उनको दाबी छ ।
उनले भनेका छन्, ‘धानको उत्पादन गत वर्ष भन्दा यस वर्षमा ८.९ प्रतिशतले बृद्धि भएको छ । मकैको उत्पादन ३.५ प्रतिशतले बृद्धि भएको छ । तरकारी उत्पादन १६.५ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।’
यस्तो छ प्रधानमन्त्रीको सम्वोधनको पूर्णपाठ
बिहीबार, २ फागुन, ०७५